विश्वभर कोरोनाबाट ४ लाख ८३ हजारको मृत्यु – Pradesh Network
Posted on June 25, 2020 Author pradeshnetwork	Comment(0)
विराटनगर , ११ असार । विश्वमा कोरोना महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख ८५ हजार पुगेको छ । आज साझ सम्म ४ लाख ८५ हजार ६ सय ११ जनाको मृत्यु भएको छ । आज दिनभर विश्वभर १ हजार ६ सय ६२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
कोरोना भाईरसबाट हाल सम्म ९५ लाख ५७ हजार संक्रमित भएका छन् । विश्वभर ४१ हजार ३ सय ३४ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । संक्रमित भएका मध्ये ५१ लाख ९७ हजार बढि उपचारपछि निको भएका छन् । ५८ हजार १ सय बढी संक्रमितको अबस्था गंभिर छ भने बाँकीको अवस्था मध्यम रहेको छ ।
अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख २४ हजार २ सय ९४ पुगेको छ । संक्रमितको संख्या २४ लाख ६२ हजार ९सय नाघेको छ । ब्राजिलमा ११ लाख ९३ हजार बढी संक्रमित हुँदा ५३ हजार ८ सय बढीको ज्यान गएको छ । रसियामा ६ लाख १३ हजार ९ सय बढी संक्रमित भएका छन् । रसियामा मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार ६ सय नाघेको छ । भारतमा ४ लाख ७४ हजार २ सय ७२ जना संक्रमित भएका छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट १४ हजार ९ सय १४ जनाको मृत्यु भएको छ । भारतमा १ हजार २ सय ८७ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । वेलायतमा संक्रमितको संख्या ३ लाख ६ हजार ८ सय ६२ पुगेको छ । वेलायतमा ४३ हजार बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।
स्पेनमा २ लाख ९४ हजार बढी कोरोना संक्रमित मध्ये २८ हजार ३ सय बढीको मृत्यु भएको छ । पेरुमा २ लाख ६४ हजार ६ सय बढी संक्रमित हुँदा ८ हजार ५ सय बढीको मृत्यु भएको छ । चिलिमा २ लाख ५४ हजार ४ सय बढी संक्रमित मध्ये ४ हजार ७ सय बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।
इटालीमा २ लाख ३९ हजार ४ सय बढी संक्रमित भएका छन् । इटालीमा ३४ हजार ६ सय ४४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
आज थप ८८४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्ठी, संक्रमितको संख्या ३७,३४० पुग्यो
Posted on August 29, 2020 Author pradeshnetwork
सप्तरी ,पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप ८८४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। २४ घन्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ३७ हजार ३४० जना पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा […]
राजविराज, १० साउन। कोरोना रोकथामका लागि तीन दिनदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको राजविराज नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी संक्रमित फेला परेको वडा नं. ६ लाई सिल गरिएको छ । १९ जना संक्रमित भेटिएको सो वडामा संक्रमितहरुको संख्या अझै बढ्न सक्ने आंकलनका साथ सडक नै अवरुद्ध गरि आवतजावत समेत बन्द गरिएको छ । गत असार ३१ गते वडा नं. […]